Xildhibaan sheegay in la carqaladeynayo heshiiskii Rooble & Musharixiinta - Awdinle Online
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka hadlay Sababta keentay in lagu kala tago wadahadalka Musharixiinta & Xukuumadda Xil-gaarsiinta ayaa sheegay in dedaallo kala duwan lagu bixiyay sidii la isugu keeni lahaa dhinacyadaan si xal looga gaaro khilaafka taagan.
Mahad ayaa nasiib darro ku tilmaamay in wada-xaajoodka Siyaasiyeed ee dhacay uu guuldareysto, halkii la rabay in lasii dhammeystiro oo loo gudbo caqabadaha kale ee taagan sida uu hadalka u dhigay.
“Wadahadalka Xukuumadda Xil-gaarsiinta waxa uu ka dhashay ergo ku beel ah Ra’iisul Wasaare Rooble oo damacsanaa baajinta isu-soobaxa Musharixiinta, markii dambe waxaa toos uwada hadlay labada dhinac oo sidaas waxaa ku yimid heshiiska 25-ka Febaraayo 2021, Rooble waxa uu wajahayay culays ah in dabada looga dhegan yahay oo la carqaladeynayo heshiiska uu gaaray” Sidaasi waxaa yiri Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Guddiga dhanka Xukuumadda ka socday uu ahaa mid ka go’an fashilinta Dibadbaxa Musharixiinta taasina ay caddeyneyso shuruudaha uu soo gudbinayay & caga-jiidka siyaasadeed ee howsha loo magacaabay.
Mahad Salaad ayaa intaas ku daray in xubno u badan Xildhibaanno ay soo jeediyeen in qorshe rasmi ah loo helo hirgelinta Doorashooyinka Dalka oo muddada loogu talagalay in lagu qabto laga soo gudbay ilaa haatana aysan muuqan waqtiga ay dhaceyso.
Previous articleQarax askar lagu dilay oo ka dhacay Bakool
Next articleWasiir la xanuunsan COVID 19 oo xoog looga saaray Diyaarad ku sii jeeday Nairobi